ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်များ - Barnyar Barnyar
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်များ
September 14, 2021 KNOWLEDGE 0
ကွန်ပြူတာဆိုတာဟာ ကိုယ့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုပေမယ့် အသုံးဝင်အောင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ဘယ်လိုလှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမှာပါ။
၁- Control + T
Browser မှာ အခြား Tab တစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် မောစ်နဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာကို သွားကလစ်နေဖို့မလိုပဲ Control + T နှိပ်လိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်။
၂- ကွန်ပြူတာမှာ error တစ်ခုခုတက်ခဲ့လျင် ပညာရှင်ဆီသွားမပြခင် အရင်ဆုံး ဂူးဂဲမှာရှာဖွေကြည့်ပါ။ဂူးဂဲပေါ်မှာ ထောင်ချီတဲ့ ကွန်ပြူတာပြဿနာတွေအတွက် အဖြေရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာစေမယ့်အပြင် ပြင်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
၃- ငွေလဲနှုန်းတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့တွက်ချက်နေစရာမလိုပဲ ဂူးဂဲ search bar မှာ 50 dollars to kyats လို့ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ အဖြေကို တန်းသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၄- laptop ဘတ္ထရီ အားကုန်ခါနီး အခါမျိုးမှာ flightmode ချပြီးတော့အားသွင်းပါ။ အဲ့ဘိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာ သာမန်အားသွင်းတာထက် ၁၅ မိနစ်နီးပါး အားပြည့်မြန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
၅- google ပေါ်က ပုံတွေကို ဒေါင်းချင်ရင် right click နှိပ် Save လုပ်စရာမလိုပါဘူး။Alt နဲ့ Left click နှိပ်ရုံနဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ပုံကို Download ဆွဲလို့ရပါတယ်။
၆- IP Address ဆိုတာက အိမ်နံပတ်လိုပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ IP လိပ်စာကိုသိရင် ကိုယ်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကို ခြေရာခံလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကို ဘယ်သူမှမသိစေချင်ရင်တော့ VPN လို့ခေါ်တဲ့ IP လိပ်စာကို ဖွက်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲတွေအသုံးပြုပါ။
၇- ညလက်ကွန်ပြူတာသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ f.lux ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုသင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲဟာ ကွန်ပြူတာစခရင်ကို အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး မျက်စိမထိခိုက်စေမယ့် အရောင်မျိုးပြောင်းလဲပေးတဲ့အတွက် ညဘက်ကွန်ပြူတာသုံးတဲ့သူတွေနဲ့အထူးသင့်လျော်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုပါပဲ.
ကှနျပွူတာတဈလုံးကို ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုတတျဖို့သိထားသငျ့တဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြမြား
ကှနျပွူတာဆိုတာဟာ ကိုယျ့အတှကျအလှနျအသုံးဝငျတဲ့အရာတဈခုဆိုပမေယျ့ အသုံးဝငျအောငျသုံးတတျဖို့လိုပါတယျ။ ဒီတော့ ကှနျပွူတာတဈလုံးကို ဘယျလိုလှညျ့ကှကျလေးတှနေဲ့အသုံးပွုရမလဲဆိုတာ ပွောပွသှားမှာပါ။
Browser မှာ အခွား Tab တဈခုဖှငျ့ခငျြတယျဆိုရငျ မောဈနဲ့ အပေါငျးလက်ခဏာကို သှားကလဈနဖေို့မလိုပဲ Control + T နှိပျလိုကျရငျလညျး ရပါတယျ။
၂- ကှနျပွူတာမှာ error တဈခုခုတကျခဲ့လငျြ ပညာရှငျဆီသှားမပွခငျ အရငျဆုံး ဂူးဂဲမှာရှာဖှကွေညျ့ပါ။ဂူးဂဲပျေါမှာ ထောငျခြီတဲ့ ကှနျပွူတာပွဿနာတှအေတှကျ အဖွရှေိပွီးသားဖွဈတာကွောငျ့ အခြိနျကုနျ သကျသာစမေယျ့အပွငျ ပွငျဆငျခ ကုနျကစြရိတျလညျး သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။
၃- ငှလေဲနှုနျးတှကေို သိခငျြတယျဆိုရငျ ဂဏနျးပေါငျးစကျနဲ့တှကျခကျြနစေရာမလိုပဲ ဂူးဂဲ search bar မှာ 50 dollars to kyats လို့ရိုကျလိုကျရုံနဲ့ အဖွကေို တနျးသိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၄- laptop ဘတ်ထရီ အားကုနျခါနီး အခါမြိုးမှာ flightmode ခပြွီးတော့အားသှငျးပါ။ အဲ့ဘိုအားသှငျးတဲ့အခါမှာ သာမနျအားသှငျးတာထကျ ၁၅ မိနဈနီးပါး အားပွညျ့မွနျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
၅- google ပျေါက ပုံတှကေို ဒေါငျးခငျြရငျ right click နှိပျ Save လုပျစရာမလိုပါဘူး။Alt နဲ့ Left click နှိပျရုံနဲ့ သငျလိုခငျြတဲ့ပုံကို Download ဆှဲလို့ရပါတယျ။
၆- IP Address ဆိုတာက အိမျနံပတျလိုပါပဲ။
ကိုယျ့ရဲ့ IP လိပျစာကိုသိရငျ ကိုယျဘယျမှာရှိနလေဲဆိုတာကို ခွရောခံလို့ရပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျ့ရဲ့တညျနရောကို ဘယျသူမှမသိစခေငျြရငျတော့ VPN လို့ချေါတဲ့ IP လိပျစာကို ဖှကျပေးတဲ့ ဆော့ဝဲတှအေသုံးပွုပါ။
၇- ညလကျကှနျပွူတာသုံးတဲ့သူတှအေနနေဲ့ f.lux ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲကိုအသုံးပွုသငျပါတယျ။ ဒီဆော့ဝဲဟာ ကှနျပွူတာစခရငျကို အခြိနျနဲ့လိုကျပွီး မကျြစိမထိခိုကျစမေယျ့ အရောငျမြိုးပွောငျးလဲပေးတဲ့အတှကျ ညဘကျကှနျပွူတာသုံးတဲ့သူတှနေဲ့အထူးသငျ့လြျောတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတဈခုပါပဲ.
“လမျးပျေါမှာ ဆိုငျကယျဦးထုပျ ခထြားခွငျးရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို သငျသိပါသလား…”
ရွှေဝတ်ဆင်ခြင်းမှကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်သည့် အချက် ၅ ချက်
Total Hits : 336256